Safidy WhatsApp tsara indrindra tokony andramanao (2020) - App
Safidy WhatsApp tsara indrindra tokony andramanao (2020)
Eo am-pikatsahana ny safidy tsara indrindra ho an'ny WhatsApp?Nahazo ny lamosinao izahay.Miaraka amin'ny manodidina Mpampiasa mavitrika 2000 tapitrisa . Ilay mpitondra hafatra WhatsApp an'ny Facebook dia, tsy isalasalana, ny serivisy fandefasan-kafatra be mpampiasa eran'izao tontolo izao. Manakodia fanavaozana tsy tapaka izy io ary manohy mampiditra endri-javatra vaovao hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa. Saingy mila mihoatra izany ny mpampiasa sasany; mila fiainana manokana izy ireo; ilain'izy ireo ny fahatokisana fa ho voaro ny tahirin-kevitra sarobidy ananany. Na dia manolotra fanafoanana farany aza ny WhatsApp, dia be loatra ny lesoka ao aminy.
Andao hanao ny marina. Tsy namaky velively ireo fe-potoana lava sy fepetra lava ireo izahay rehefa nanasonia zavatra. WhatsApp dia mamoaka am-pahalalahana ny angon-drakitra fampiharana azy ireo izay miafara amin'ny fiafenana miafina, fa ny tena marina dia ao anatin'ireo Fepetra sy fepetra ireo dia misy zavatra sasany manome ny vondrona orinasa Facebook zony maro hampiasa ny angon-drakitrao. Azon'izy ireo ampiasaina ny datao ho an'ny tanjona maro samihafa ao amin'ny Organisation ary omena izany ho an'ny Governemanta mihitsy aza raha mitady izany na amin'ny lafiny inona na amin'ny fomba ahoana.
Facebook, indrindra indrindra, dia tao amin'ny vaovao momba ny zavatra maro mifandraika amin'ny angon-drakitra momba ny mpampiasa, ary tsy mety izany.Noho izany, olona maro no mitady fomba hafa azo antoka sy azo antoka kokoa noho ny WhatsApp. Raha eo anivon'izy ireo ianao dia eto hanampy anao izahay. Rehefa mandeha ny lohateny dia ho entinay mamaky ny sasany amin'ireo safidy tsara indrindra azonao ampiasaina fa tsy WhatsApp.
Manontany tena ianao hoe iza no app WhatsApp na signal tsara indrindra? Taratasim-bola WhatsApp vs Signal fampitahana.
10 Alternatives WhatsApp tsara indrindra 2020:
Ity fampiharana fandefasan-kafatra any UK ity no safidy tsara indrindra ho an'ny WhatsApp. Manao izay rehetra tokony hataon'ny mpitondra hafatra izany. Miaraka amina endri-javatra fanampiny be dia be, ny interface interface dia tsotra, ny mpampiasa vaovao dia tsy hanana olana amin'ny fametrahana azy. Miaraka amin'ny API misokatra dia atokisan'ny mpampiasa azy bebe kokoa, ary maro no aleony mihoatra ny WhatsApp.
Ny hafatra Telegram dia voahidy miafina, toy ny WhatsApp ihany, ary afaka mandefa hafatra manimba tena ihany koa ianao. Raha ampitahaina dia mamela anao hamorona vondrona misy mpikambana 256 ny WhatsApp ary mizara rakitra hatramin'ny 100 MB. Ao amin'ny Telegram, azonao atao ny mamorona vondrona afaka mitazona mpampiasa hatramin'ny 200000 ary mizara rakitra media hatramin'ny 2 Gigabytes ao anatin'ny indray mandeha.
Manolotra feo ary koa antso an-tsary. Misy endri-javatra mahafinaritra be dia be toy ny Bot sy lalao azo fidirana ao anatin'ny mpitondra hafatra izay hanatsara ny zavatra niainanao.
Vondron'ny vondrona hatramin'ny mpikambana 200,000
Fahafahana mandefa rakitra haino aman-jery hatramin'ny 2GB
Maivana be ho an'ny fitaovana.
Encryptions azo antoka ho an'ny data an'ny mpampiasa.
Fahaizana manampy Bots sy milalao lalao.
manangona metadata (voatahiry ao anaty lohamilina mandritra ny 12 volana farafaharatsiny)
Fahafahana amin'ny sehatra:Android, iOS, finday Windows, iPadOS, Windows PC, MacOS, Linux (Maimaimpoana)
2. Iraka tsy miankina Signal
Ity mpandefa hafatra ity dia entin'ny mpamorona nanangana ny farany hatramin'ny farany ny encryptions ho an'ny WhatsApp. Saingy tsy toy ny WhatsApp, Signal messenger dia manana rafitra loharano misokatra, izay mahatonga azy io ho azo antoka kokoa noho ny WhatsApp. Hanampiana izany, Signal koa dia manana fiasa fiarovana roa toy ny hafatra manimba ny tena sy ny endri-piarovana amin'ny efijery, izay midika fa tsy ho afaka haka pikantsary ianao rehefa alefa.
Ny signal dia tsy mamono fotsiny ireo hafatra alefanao, fa mampiditra ny angon-drakitra rehetra zarainao ihany koa, anisan'izany ny antso sy ny rakitra media. Tsy misy olona, ​​na Signal aza, afaka mamaky ny hafatrao sy mandre ny antsonao.
Azonao atao ny manamboatra sy mizara ny sticker-nao manokana ary mamorona vondrona toa ny WhatsApp ihany koa. Ny signal dia mamela ny backup backup ho an'ny fitaovana android, izany koa ao amin'ny fitaovana fa tsy amin'ny toeran-kafa.Ny maha-azo antoka an'io, dia ampiasain'ny olona mitarika amin'ny tontolon'ny IT toa an'i Edward Snowden sy Jack Dorsey.Inona koa no ilainao hanamafisana fa tena safidy azo antoka sy azo antoka ho an'ny WhatsApp izy io?
Tontolo fandefasana hafatra azo antoka
Rafitra loharano misokatra
Mitahiry kely mankany No metadata
Fampiatoana ireo antso an-tariby
Tsy afaka mampiasa azy raha tsy havaozina. Ary matetika ny fanavaozana. Tsara ho an'ny filaminana izany, saingy nampidirinay tao anatin'ny faritra maharatsy azy satria matetika ny fanavaozana ary mety hanakantsakana ny traikefa.
Hatramin'ny 300kbs dia tsy afaka halefa ireo rakitra media.
Tsy misy safidy backup backup ho an'ny mpampiasa iOS.
Fahafahana amin'ny sehatra:Android, iOS, iPadOS, Windows, Mac, Linux. (Free)
Ity hatsaran'ny rindrambaiko fandefasan-kafatra ity dia fahatelo amin'ny lisitray, novolavolain'ny orinasa iray any Suisse, toy ny firenena niavian'izy io, tsara tarehy sy mahaliana ny maso ny interface amin'ny mpampiasa. Ny interface tsara sy ny rafitra open-source azo antoka mahatonga azy io ho safidy tsara amin'ny WhatsApp.
Voamarina tsy miankina izy io, ary ampahafantarina ampahibemaso ihany koa ny valin'ny fanamarinana, ka mahatonga azy ho mangarahara amin'ny fomba fiasa.Izy io dia manana fiafarana hamaranana ny teknolojia enkripsi ary manolotra endrika hafatra manimba tena. Ny taribymanana ny toeran'ny rahony manokana anaovana backup backup.
Izy io dia manolotra antso an-tsary sy horonan-tsary miaraka amina endri-tsoratra enina. Ny antso an-tsary ataon'ny vondrona dia azo atao amin'ny alàlan'ny Wire hatramin'ny olona 10.Azonao atao ny miditra ao amin'ny Wire avy amin'ny fitaovana maro indray mandeha, endri-javatra izay tsy omen'ny WhatsApp.
Rafitra loharano misokatra.
Fahafahana miditra avy amin'ny fitaovana marobe indray mandeha.
Fifanarahana mpampiasa tsotra nefa tsara tarehy sy hafa raha ampitahaina amin'ny mpitondra hafatra hafa
Fahafahana miantso antso an-tsary.
Mitahiry ny metadata anao io.
Ny fifantohana dia eo amin'ny tontolon'ny orinasa.
Fahafahana amin'ny sehatra:Android, iOS, macOS, fanitarana Browser, Linux. (Free)
Fantatra amin'ny anarana hoeRakuten Viberdia rindrambaiko fandefasana hafatra VoIP monina any Japon izay mandeha andoha amin'ny WhatsApp. Saika manana ny zavatra rehetra atolotry ny WhatsApp izy ary misy aza ny fiasa tsy ampy amin'ny WhatsApp. Ny hafatrao, antso, ary koa ny haino aman-jery zaraina dia miafara amin'ny fiafenana encrypt ao amin'ny Viber. Azonao atao ny mamorona vondrona ao amin'ny Viber hatramin'ny mpampiasa 250 ary na dia vondrona antso an-tsary miaraka amin'ny mpampiasa 20 aza.
Misy ihany koa ny fanohanana ny GIFs sy ny sticker. Azonao atao ny manafatra na manamboatra petadrindrina anao manokana ary mizara izany amin'ny fifandraisana.Ny mampiavaka an'i Viber dia ny famelana ny fiantsoana iraisampirenena amin'ny taha nominal ho an'ireo mpampiasa izay tsy manana kaonty Viber.Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana marobe amin'ny fotoana voatondro.
Endri-javatra iray hafa izay atolotry Viber dia ny fiasa eo amin'ny fiarahamonina. Betsaka ny vondrom-piarahamonina ao amin'ny Viber ahafahanao mifanerasera amin'ny alàlan'ny fitiavanao sy ny fanehoan-kevitrao amin'ireo lahatsoratra.
Azo atao ny fihaonambe video
Afaka manao antso iraisam-pirenena amin'ireo mpampiasa tsy manana Viber amin'ny taha nominal.
Fahaizana milalao lalao ao anaty app
Izy io dia manohana doka
Tsy dia interface-friendly ilay mpampiasa.
Fahafahana amin'ny sehatra:Android, iOS, iPadOS, Windows PC, Mac, Linux. (Free)
Miharatsy ny raharaha rehefa momba an'i Threema. Fampiharana misy karama sy iray amin'ireo fampiharana fandefasan-kafatra azo antoka indrindra azonao raisina eny an-tsena. Mifarana ny fampitsaharana ny fanafenana hafatra, haino aman-jery zaraina, ary koa ny hetsika atao satry. Tsy misy metadata angonina, ary mihoatra ny iray ny karazana safidy backup voafafa afaka miaraka amin'i Threema.
Tsy ampy ao amin'ny fizarana fiantsoana, na ny antso an-tsary na ny video dia tsy azo atao amin'ny alàlan'ny fampiharana, ary izany no antony nitanisanay azy tamin'ny farany.Saingy na dia tsy ampy ao amin'ny sehatry ny fiantsoana aza izany, raha mijery ny lafiny fandriam-pahalemana amin'ny fampiharana ianao dia mendrika ny hijery ireo fisehoana tsy hita ireo.
Ny interface-ny dia mahitsy ary tsy miankina amin'ny mariky ny fampiharana fandefasan-kafatra hafa, fa raha miresaka momba ny finamanan'ny mpampiasa izy dia somary mora ny mampiasa sy manamboatra azy.Raha hampiasa Threema dia tsy mila manome nomeraon-telefaona na adiresy mailaka ianao. Amin'izany no amoronanao anarana tsy fantatra anarana.
Ny hafatra rehetra, miaraka amin'ny haino aman-jery, dia voafafa.
Tsy mila manome nomeraon-telefaona na id mailaka ianao amin'ny famoronana kaonty
Fifanarahana tsotra sy mora raisin'ny mpampiasa
Tsy misy afaka mandefa hafatra aminao. Mila manaiky ny hafatra aloha ianao.
Serivisy aloa io.
Olana hiasa amin'ny fifandraisana Internet miadana.
Tsy misy rafitra loharano misokatra.
Fahafahana amin'ny sehatra:Android, iOS, Browsers.
Pricing:Azonao atao ny manandrana an'i Threema maimaim-poana hatramin'ny 60 andro, tsy misy adidy mividy azy.
Ny drafitra roa hafa dia
Drafitra fandraharahana:CHF 1,40 ($ 1,54)
Drafitra orinasa:CHF 1,90 ($ 2.09)
Ity no azonao amin'ny drafitra voalaza etsy ambony
# 1. Misokatra ve ny WhatsApp?
taona:Tsia, WhatsApp dia tsy rindrambaiko nalalaka, ary izany no mahatonga ny olona maro hanary azy io hisolo safidy hafa izay malalaka sy azo antoka kokoa.
# 2. An'ny Facebook ve ny WhatsApp?
taona:WhatsApp dia novidian'ny Facebook. Inc tamin'ny Febroary 2014 $ 19 miliara. Ny fanaovana azy io ho fananana Facebook lehibe indrindra hatramin'izay. Orinasa mahaleo tena taloha io.
# 3. Fa maninona aho no tokony hampiasa fomba hafa amin'ny WhatsApp?
taona:Ny antony lehibe indrindra dia ny loopholes ananan'i WhatsApp amin'ny fiarovana azy. Fepetra sy fepetra miafina maro izay manimba ny angon-drakitrao. Ny data omenao amin'ny WhatsApp dia mihodina amin'ny mpizara orinasa rehetra eo ambanin'ny Facebook. Afaka mijery ny angon-drakitrao ny governemanta raha misy ny toe-javatra tsy tokony hitranga. Ary fananan'ny Facebook, tsy atokisana mihitsy satria Facebook niatrika fitoriana be loatra momba ny filaminan'ny mpampiasa.
# 4. Iza amin'ireo safidy hafa tokony hialana?
taona:Raha resaka alternatives no resahina dia azo antoka sy atokisana daholo ireo notanisainay ireo, fa ny sasany amin'izy ireo dia mbola ratsy noho ny Whatsapp aza, ary tokony hifikitra amin'ny WhatsApp kosa ianao fa tsy hampiasa azy ireo
Na dia fampiharana fandefasan-kafatra lehibe aza ny WhatsApp dia tsy tsara ho an'ny tsiambaratelon'ny mpampiasa izany. Ny safidy hafa notanisainay dia tsy miankina amin'ny mariky ny WhatsApp raha ny momba ny tobin'ny mpampiasa, fa raha resaka filaminana kosa dia tsara kokoa daholo. Ny rindrambaiko tsirairay dia manana ny mahatsara sy maharatsy azy, ary efa notanisainay ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao alohan'ny hisafidiananao ireo safidy hafa.
Sintomy ny Kik Messenger ho an'ny PC
pubg tsy nahomby tamin'ny fanombohana ny fanamboarana ny etona
ny fomba fanaovana hoditrao minecraft amin'ny pc
nofoo ny famandrihako disney plus
ny tsara indrindra Android TV boaty 2018
mbola eto izahay putlocker
ny fomba hijerena fanatanjahan-tena an-tserasera maimaim-poana